Iindaba-Wamkelekile kwi-47 ye-CIFF
Yaziswa ngo-1998 kunye nababonisi abangama-384, indawo yokubonisa yeemitha zesikwere ezingama-45,000 kunye nokuzimasa kwabathengi abangaphezulu kwama-20,000, i-CIFF, i-China International Furniture Fair (i-Guangzhou / i-Shanghai) iye yabanjwa ngempumelelo kwiiseshoni ezingama-45 kwaye yenza eyona ndawo ikhethwayo yokurhweba emhlabeni iqonga lokwazisa ngemveliso, ukuthengisa ngaphakathi kunye nokuthengisa kumazwe angaphandle kurhwebo lokubonelela.
Eyilwe kwaye yaphuhliswa kangangeminyaka eli-17 eGuangzhou, ukuqala ngeyoMsintsi ngo-2015 kwenzeka qho ngonyaka eGuangzhou ngo-Matshi nase-Shanghai ngo-Septemba, la maziko mabini anamandla e-China.
Imodeli entsha yeshishini ukomeleza umzi mveliso wefanitshala Ukusukela ngo-2021
“Ukuyilwa kwendlela, urhwebo lwehlabathi, ukuthengiswa kwento yonke” ngumxholo omtsha apho i-CIFF Guangzhou iphinda ibeke endaweni yayo ukunceda uphuhliso lwecandelo kwimeko yobhubhane wehlabathi.
Ushicilelo lwama-47 lwe-China International Furniture Fair, olona msitho uyintloko wefenitshala ye-2021 e-China, luya kujolisa ekuphakamiseni ixabiso loyilo kunye nokwenza imodeli entsha yeshishini ngokunxibelelana neziganeko ezikhoyo kunye nemithetho emitsha yomdlalo. Imodeli isekwe kuthelelwano phakathi kweemarike zangaphakathi ezingaqhelekanga kunye nokukhula okuthe kratya kokuthunyelwa kwamanye amazwe, kunye nokudityaniswa kokunyuselwa ngaphandle kweintanethi kunye ne-intanethi ukwenzela ukuba unikeze ipotifoliyo yomboniso eyenziweyo, ebanzi emele ngokwaneleyo ishishini lefanitshala, lihlala lixhasa iimfuno Ababonisi kunye neendwendwe.
I-CIFF i-Guangzhou 2021 izakubanjwa ngokwamanqanaba amabini ahlelwe licandelo lemveliso: eyokuqala, ukusuka nge-18 ukuya kwi-21 Matshi, enikezelwe ekhaya, ifanitshala yangaphandle neyokuphola, ukubonelela ngezixhobo kunye namalaphu; owesibini, ukusukela ngomhla wama-28 ukuya kowama-31 kweyoKwindla, wefanitshala yaseofisini nosihlalo, impahla yehotele, ifanitshala yentsimbi, ifanitshala yeendawo zikawonke-wonke neendawo zokulinda, izinto zokusebenza, izixhobo kunye noomatshini beshishini lefanitshala
Ukugubungela indawo iyonke ye-750,000 yezikwere, i-China yokungenisa kunye nokuthumela ngaphandle i-Complex Fair e-Guangzhou kulindeleke ukuba ibambe iinkampani ezingama-4,000 kunye neendwendwe ezingama-300,000 zorhwebo.
Impumelelo yamahlelo amabini okugqibela e-CIFF yowama-2020, ebibanjwe ngoJulayi eGuangzhou nangoSeptemba eShanghai, kumzuzu onzima ngolu hlobo kwimbali kuye kwavuza abatyali-mali, ukusebenza nzima, kunye nokuzibophelela ekuhlaleni benika abona bantu baphambili kushishino lwefanitshala , amathuba ekhonkrithi.
I-CIFF iyangqinisisa ubume bayo njengelona qonga lishishini libaluleke kakhulu kwimakethi yaseAsia, umsitho ongenakuphikiswa apho iimveliso zoyilo zibalaseleyo ziya kuthi zibonise iimveliso ezintsha zoyilo olunomdla kunye neengcinga ezintsha ngokuhambelana neendlela zakutshanje kwimarike eguqukayo ngokukhawuleza ekukhangeleni phezulu Isisombululo esilinganayo nesiyilayo, esincediswa yimisitho yodumo kunye nokhuphiswano loyilo.
Wamkelekile kwindawo yethu yemiboniso!
Imihla kunye neeyure zokuvula
Ngomhla wamashumi amabini anesibhozo ku-Matshi, ngo-2021 ngo-9: 30 kusasa ngo-6: 00 ngokuhlwa
Ngomhla wamashumi amabini ananye ku-Matshi 2021 9:30 am ukuya ku-5: 00 ngokuhlwa
Indawo yePoly World Trade Center Expo